စျေးသက်သာတဲ့ Galaxy Note 10? ဆမ်ဆောင်းက၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည် Androidsis
Samsung မှအစပြုခဲ့သောအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းစီးရီးများ Galaxy Note ကို 10။ ဤသည်ကိုအောက်တိုဘာလဖြစ်သောပြီးခဲ့သည့်လ၏အစတွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို standard version ဖြစ်သော Galaxy Note 10 နှင့် Galaxy Note 10 Plus တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သူတို့နှစ်ခုစမတ်ဖုန်းများမှာကတည်းက ဆု အကောင်းဆုံးတို့၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူသူတို့သည်စျေးသိပ်မကြီးသောကြောင့်လူတိုင်းမဝယ်နိုင်ပါ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်စပိန်တွင်စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၀၀၀ ထက်မနည်းပါ။ သို့သျောလညျး, ဒီစီးရီး၏ရောက်ရှိ၏ကျယ်ပြန့်ရန်, Samsung ကဈေးနှုန်းသက်သာစွာရနိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာအဖြစ်ထပ်တူပုံစံမျိုးကိုစိတ်ထဲထားရှိမယ်အသစ်ပေါ်ထွက်လာသည့်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအရ
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Galaxy Note 2014 Neo ဟုခေါ်သည့်ဈေးသက်သာသည့်စာစောင်ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် Samsung SM-N770F သည်စျေးနှုန်းသက်သာသည့် Galaxy Note 10 ဖြစ်နိုင်သည်.
ရုံပေါ်တယ်လိုပဲ Gizmochina အသေးစိတ်အားဖြင့် Galaxy Note terminal ၏နံပါတ်များသည် "N" အက္ခရာဖြင့်စတင်သည်။ ယခုအချိန်အထိဖြန့်ချိခဲ့သည့် Note Note စမတ်ဖုန်းစီးရီးအားလုံးတွင် "SM-N9XX" ပုံစံနံပါတ်များရှိသည်။ Galaxy Note 10 ၏မော်ဒယ်နံပါတ်မှာ SM-N970 ဖြစ်ပြီးယခင် Galaxy Note3Neo ကို“ SM-N750” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် SM-N770F သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် Galaxy Note 10 အဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်းကို 'Neo' တံဆိပ်အောက်တွင်ထုတ်လွှတ်မည်လားဆိုသည်ကိုမူစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်။
ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းဟာဈေးနှုန်းချိုသာစွာလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကအနည်းငယ်အတွက်ထည့်လေ့မရှိ 700 ဒေါ်လာ, အလွန်ကောင်းတဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစျေးနှုန်းနဲ့အတူ၊ ဒီစီးရီးရဲ့လက်ရှိမော်ဒယ်များထက်စျေးနှုန်းများပိုမိုများပြားတဲ့ရွေးချယ်မှုများထက်အခြားအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » စျေးသက်သာတဲ့ Galaxy Note 10? Samsung ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်